Maitiro Ekugadzirira Kudziya Kwemamiriro ekunze Kana Uchirarama Nenyaya Yekufamba
Sezvo ruzhinji rwenyika rwuri kupinda mukati, uye pamwe rwuri kusangana, nguva inotonhora zvakanyanya yegore, zvinokurudzirwa kuti uve nechokwadi chekuti chero munhu anoshandisa midziyo yekufambisa senge ibvi. vanofamba kana mawiricheya anyatsogadzirira.
Zvichienderana nehukuru hwezvido zvako zvekufamba, kugadzirira nguva yechando kuchasiyana kubva pane imwe nyaya kuenda kune inotevera, zvisinei pane zvimwe zvakapusa zvaunogona kutora kuti uve nechokwadi chekuti une chando chakachengeteka.
Gadzirira nevadiwa kana muchengeti wekubatsira.
Kana iwe ukaitika uri mune imwe mamiriro mauri parizvino une wenguva dzose kana kugara-muchengeti anobatsira nezvinodiwa zvako, ita nguva yekuongorora zvinodiwa pakuchengetedza kutonhora uye kwakasviba mamiriro ekunze. Muchiitiko chekuti hauna rudzi urwu rwe rubatsiro rwakagadzirira, taura nevanodiwa kana shamwari kuti uone kana vachigona kubatsira kana iwe uchida rubatsiro rwakawedzerwa mumwedzi inotonhora yechando.
Bvumira yakawedzerwa nguva yekufamba.
Kunyangwe vanhu vazhinji vane chekuita nekunetseka kwekufamba vachifanira kufunga imwe nguva yekufamba nzendo dzavo, nguva yechando kufamba kungangoda imwe nguva yakawedzerwa.
Njodzi yemigwagwa ine njodzi, inofamba zvishoma nezvishoma uye isingazezi kufamba, tisingatauri mota dzakamiswa zvinoratidza kuti nzendo dzemamiriro ekunze echando dzinowanzoitika uye dzine njodzi. Ita shuwa kuti iwe unozvipa iwe yekuwedzera imwe nguva yekusvika kwauri kuenda.
Tora Emergency Exit Strategy.
Mamiriro ekunze echando anoita kuti zviomere chero munhu kubuda… kunyanya vanhu vanovimba newiricheya ramp kusiya dzimba dzavanogara. Kana yako yekubuda yakajairwa yakavharirwa kana isipo, ita shuwa yekuve ne backup paruoko.
Kana iwe usina kufambidzana imwe nzira yekubuda mumba mako, iyi ndiyo imwe nzira yaunogona kuvimba nemhuri uye neshamwari kuti ubatsirwe.
Edza kuita kutumwa uye kubuda masikati.
Kana tembiricha ikadonha pakati pehusiku, nzira dzinowedzera uye dzinokuvadza. Nechikonzero ichi, tarisa mamiriro ako emamiriro ekunze uye ita nhamburiko yekutora zvese zvawatumira uye rwendo rwupedziswe munguva inodziya yemasikati.
Tsvaga Rubatsiro Rwakakosha munzvimbo yaunogara
Nzvimbo dzekugara dzemunharaunda uye mapoka enharaunda anogona kupa rubatsiro rwakakosha kuvanhu vane hurema panguva yechando mamiriro ezvinhu.
Runhare pamberi penguva uye simbisa nemapoka aya ,, sezvo vamwe vachida kunyoreswa. Wongorora kuti uone kana munharaunda maunogara muchipa rudzi urwu rwebasa. Ive neshuwa yekutevedzera kune izvi zviito kuti iwe ugone kuve wakanyatso gadzirira ino yechando.